2007-01-31 Borlänge, Sweden
Mohamed-Deeq Abadi-madar ”Haldhaa”
Maansadan waxaan tiriyay 31kii janaayo 2007. Sababtuna waxay ahayd waxaa isoo wacay 28kii janaayo sanadkan 2007 nin ananu saaxiibbo nahay, lakaiin ananu arrimaha siyaassada ku kala aragti duwanahay. Wuxuu igu yiri taniyo markii aakhirkii desember laga saaray muqisho iyo koonfurta Soomaaliya Maxaakiimtii Islaamka, wax wara waa lagaa waayay oo maqaaladdii iyo weerarkii kululaa ee ada Itoobiya ku qaadi jirtay, waa lagaa waayay ee maxa akugu dhacay.
Isagu wuxuu igu durayay in ay dani i aamusisay oo haddii qoladii aan ka soo horjeeday ay xoog ku qabsadeen Soomaaliya. Waliba in ana cabsaday oo ay cabsi i aamusiisay. Wuxuuna u arkayay in aan ku qasbanahay in aan hadda taageero ama aan isaga aamuso ceebayntooda.
Waxaan ku iri;- saaxiib sidada wax u fahantay maahan. Anigu markii horaba waxaan taageerayay jiritaanka Soomaaliyeed. Waxaana ka soo horjeeday Xabshi iyo cid kastoo aan jeclayn jiritaanka iyo midnimada Soomaaliyeed.
Runtii kumuusan qancin. Laakiin waxaa markiiba igu soo dhacay maansadan. Markaas ayaana qalinka u qaatay. Marka akhriste adna ila arag dareenkayga.
Raggii uu hareedku
Haaneedka u fuulay
Markay hab cadeenee
Hilfaha loo qaaday
Xamar ka huleeleen
Darbaa nafta hiifay
Ka haayiray guusha
Haabka ku qaatay
Haatuf nin sheegay
Wuxuu yiri hoogtay
Ninkii hebel maatid
Maxaa ku haleelay
Haldhaa lagu waayee
Maxaa helay maanta
Waxaan iri haaka
Adoo harka jooga
Afkaa ka hadlaynin
Habaasku ku aasay
Intaan hab kusiiyay
Hayinka ku saarin?!
Intaan hooto tuuray
Huurada qurmuun leh
Intaan hargo waaxay
Ka soo qubin hoorta?!
Halkuu naqu yaalo
U sii hor kacaynin?!
Hangoolka u jiidin?!
Intoow gacan haadshay
Haruubka ka buuxsan?!
Hurdada ku raagay
Hawshiina ka daahay
Inta hoonka yeershay
Dheemman ku haysta
Karaawil u hiilin?!
Hoggaa la qodaayo
Dadkayga ku hoobtay
Intaan hor istaagay
Hareer uga leexin?!
Tigree hiijo qaaday
Inta god ku huurshay
Ku heerin dagaalka?!
Qabiil isku hiifka
Hilib u colloowga
Intaas ku harraadin?!
Dadkaa la hafraayo
Hareerta ka joogsan?!
Hirkaa sare gaaray
Anoon xil ka haynin
U sii hunguryoonin?!
Markii had kastaaba
Ninkii la hallaago
U hiillin aqoonin?!
Colkaas la horjoogo
Intaan rag hubeeyo
Hawser la qaadan?!
Dhankaa bari hooray
Haamaha u aroorin?!
Dhulkii aabbe hooyo
Ka soo hijro dhoofay
Laabtu ii huraynin?!
“H” “W” iyo siinka
Intaan hadh galbeedka
Ka so hil-hillootay
Qur’aanka aan hoorshay
Hagaag ugu sheegin?!
Wax saasa hanbeynin
Laabta ku haayo
Halkaan wax la doono
Rabaa ii hagaajin.